Desktop Desktop Falgalka Falgalku
Arbaco 11 Bisha Shanaad 2022
Desktop Desktop Falgalka Falgalku Qalabkan casriga ah ee loo yaqaan desktop desktop ayaa loogu talagalay in lagula macaamilo dadka leh riyooyin maalmeed. Godadka waxaa loo habeeyay oo lagu daro aalado, lollipops, ama maadooyin ku habboon qaabkeeda qaabab kala duwan. Dusha sare ee loo yaqaan 'chromed dusha' ayaa ka tarjumeysa oo u beddela codad mowduucyada la soo bandhigay dadkuna way la macaamilaan.
Talaado 10 Bisha Shanaad 2022
Isniin 9 Bisha Shanaad 2022
Axad 8 Bisha Shanaad 2022
Sabti 7 Bisha Shanaad 2022
Jimco 6 Bisha Shanaad 2022
Iftiin Nalalka Louvre waa laambad miiska isdhaxgalka leh oo ay ka dhasheen iftiinka qoraxda xagaaga ee Giriiga kaas oo si sahlan uga gudbo xirnaashaha xiran illaa Louvres. Waxay ka kooban tahay 20 giraan, 6 bajk iyo 14 oo ah 'Plexiglas', oo wax u beddelaya qaab qaab ciyaareed leh si loogu beddelo kala-baxa, mugga iyo muuqaalka ugu dambeeya ee iftiinka iyadoo loo eegayo doorbidista isticmaaleyaasha iyo baahiyaha. Iftiinku wuxuu maraa walxaha wuxuuna sababa kala go ', sidaa daraadeed hoosku kama muuqdo laftiisa dusha sare. Rings leh dherer kala duwan ayaa siinaya fursad isku-darka aan dhammaadka lahayn, isbadal nabadgelyo leh iyo xakamaynta iftiinka guud.
Calendar 2014 “Botanical Life” Kalandarka Isniin 4 Bisha Todobaad
Calendar 2014 “Farm” Kalandarka Axad 3 Bisha Todobaad
Calendar 2014 “Town” Kalandarka Sabti 2 Bisha Todobaad
Desktop Desktop Falgalka Falgalku Maaskaro Kaaliyaha Qurxiyo Rakibaadda Mawduuc Nalka Miiska Iftiin